Amathiphu Okuvumela Ukuthengisa | Martech Zone
ULwesihlanu, February 15, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UJenn Lisak Golding
Ukushintshwa kwezimakethe nezentengiselwano kuyala ukuthi senza kanjani ibhizinisi. Ngokuqondile, lokhu kubhekisa ekutheni ukuthengisa kusondela kanjani kumathemba amasha nokuvala isivumelwano. Amandla okuthengisa asebenzisana nokumaketha nokuthengisa ngenkathi kukhiqizwa imali. Ukuqinisekisa ukuthi lezi zinhlelo zihambisana kubalulekile ekuphumeleleni kokumaketha nokuthengisa.
Njengomthengisi, impela ngithola ukuthi imizamo yokumaketha ibalulekile. Kodwa ekupheleni kosuku (kuya ngesimo), iqembu lokuthengisa lisazoba nomthelela omkhulu “oshubile” kulokho okulindelwe ngoba kunokuxhumana okuqondile nokwangasese (uma nje sebekwedlulisile ukumaketha okususelwa kwimvume noma thinta ngqo). Ukuba nohlelo lwamasu lokuthi ungafinyelela kanjani kumathemba ngokombono wokuthengisa sekubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili. Ngenkathi umjikelezo wokuthengisa ungaba mude njengomjikelezo wokumaketha, iphoyinti ngalinye lokuthinta linganquma ukuthi ngabe useduze nokuhlala phansi unethemba noma ukuthi usuqedile ukukhuluma nawe unomphela.
Uma ufuna ukuqinisekisa ukuthi ususondele esinyathelweni esisodwa kulowo mhlangano, nazi izindlela ezimbalwa ze- amathiphu wokuvumela ukuthengisa:
Thola imizwa ngohlobo lwakho lomuntu olulindelekile nesitayela sokufunda. Abantu bafunda futhi bagaye okuqukethwe ngezindlela ezahlukahlukene. Ngokuqondile, kunezinhlobo ezi-3 zokufunda: okuzwisisekayo, okubukwayo, nokwenziwa ngomunwe.
Uma ngabe ithemba lakho libonakala lifunda ngokuzwa "okushoyo, qiniseka ukufaka ama-podcast, izixhumanisi zomphakathi, noma amavidiyo kusiphakamiso sakho. Lezi yizindlela zokuxhumana ezizothintana nalolu hlobo lwethemba.
Uma ithemba lakho libonakala liphendula kakhulu ngamagrafu, amashadi, noma izithombe, khona-ke une-visual visual ezandleni zakho. Lolu uhlobo lomfundi oluvelele kakhulu. Izinhlobo zokuqukethwe eziningi ziyathandeka kulo mfundi - amavidiyo, ama-infographics, ama-ebook, amaphepha amhlophe, izithombe, njll. Uma "ukhombisa" ithemba lokuthi ukhuluma ngani, maningi amathuba okuthi bakuqonde futhi bakubalule ukubaluleka kwalokhu okushoyo.
Okokugcina, kunabafundi be-kinesthetic, abafunda ngokwenza. Lokhu kunzima ukubamba ngombono wokumaketha okuqukethwe, kepha kungenziwa. Bafuna umhlahlandlela noma okuqukethwe "okubasizayo" okubatshela ukuthi "bangaphumelela kanjani". Ama-Whitepapers, ama-ebook, amavidiyo, nama-webinars agxile ekutheni ungafeza kanjani okuthile alungele lolu hlobo lwethemba. Ukukhombisa ubuchwepheshe nokunikeza lolo lwazi kubo kubalulekile.
Qaphela zonke izindlela ezingaba khona. Ngokuvamile, akekho noyedwa owenza izinqumo enkampanini. Ukunquma ukutshala imali kusevisi noma kumkhiqizo kuyisinqumo seqembu. Ngenkathi kunabantu abathile abanezwi elikhulu kunabanye, kubalulekile ukunxenxa amaqembu amaningi ngaphakathi kwenqubo yokwenza izinqumo.
Ubani umkhiqizo noma insizakalo yakho ezosizakala? Lokhu kufaka phakathi ukumaketha, ukuthengisa, ukusebenza, kanye nama-execs (umugqa ongezansi). Ingabe usuyibonile ukuthi umkhiqizo / insiza yakho isiza kanjani ngamunye walaba bantu?
Sibona ukwanda kwemibuzo yokubizelwa esenzweni. Esikhundleni sokutshela ithuba lokwenza okuthile, izinkampani zibuza imibuzo ukukhuthaza ukuchofoza kumasayithi abo. Abantu benza izinqumo ezincike kokulungele bona - okuqukethwe okuzungeze “ama-personas” kuzosiza ekunciphiseni isinqumo seqembu.
Our umxhasi wesiphakamiso sokuthengisa, I-TinderBox, inikeza ithuba lokwenza iziphakamiso zemithombo yezindaba ezicebile ezizonxenxa lonke uhlobo lomfundi, futhi wazi ukuthi ubani obuka isicelo sakho. Lawa ma-metric ekugcineni azosiza ukuvala isivumelwano futhi athuthukise ukuphrinta kwamakhasimende. Ukuphathwa kweziphakamiso zokuthengisa kuyisihluthulelo sokuphumelela ekuvunyelweni kokuthengisa. Ukufunda ukuthi ungasakha kanjani isiphakamiso sokuthengisa esisebenzayo kuzokwandisa ukuguqulwa bese uchofoza ukudlula.
Yiziphi ezinye izeluleko onazo zokuthengisa onazo? Yini enye oyibonayo embonini?
Tags: ukukhulumisanaUkukhangisa OkuqukethweUkulindelaUkunika Amandla Ukuthengisaamathiphu wokuvumela ukuthengisa